Ndị na -emepụta igwe na ndị na -ebubata ya China IVEN
Nchịkọta Mkpa Mbara Ọbara na -agbakọta Line
Maka mmepụta mkpịsị agịga nchịkọta mkpịsị ọbara.
Ibu ihe nkwụnye agịga loading Ibu agịga → Gluing → ihicha ete Nchọpụta mkpọchi mkpọchi → Nchọpụta ihe mgbochi agịga → Siliconization removal mkpofu ahihia → mkpuchi mkpuchi ogologo-agịga → mkpuchi ịpị revers ntụgharị ihu agịga → mkpuchi mkpuchi dị nro pressing mkpuchi ịpị → mkpirikpi mkpuchi na -echebe Loading pressing Ịpị mkpuchi product Ngwa emechara.
Nkọwa ọdụ ọrụ
Onye na -ejide agịga nri
Jide ihe njide agịga site na vibrator, wee banye n'ụzọ mmịfe wee tinye ya na eriri ngwaọrụ.
Na -ebugo agịga ahụ na usoro thimble agịga, a na -ebuli agịga ahụ elu n'obere agịga site na iberibe ebu oche agịga wee tụba ya n'oche agịga, mgbe itinyechara agịga ahụ, tụgharịa ntụzịaka wee banye ebe gluing.
Ebe a kwadebe na nchọpụta maka agịga
Onye ọkwọ ụgbọ ala Panasonic nke Japan na -akwagharị gluu, a na -etinyekwa akwụkwọ ntuziaka abụọ ahịrị ka ha na -anya tray gluu ka ha wee nyefee gluu. Igbe igbe gluu na -anabata German Lenuz iji chọpụta na akpaghị aka ma igbe gluu nwere gluu ma ọ bụ na ọ nweghị, ma ọ bụrụ na enweghị igwe gluu akwụsị na -akpaghị aka, a na -egosipụta mkpu na ihuenyo mmetụ.
Ọwara ihicha bụ iji kpoo gluu, igbe nkụ na -ekpo ọkụ site na iko iko igwe anaghị agba nchara, yana ihe ngosi dị ugbu a, onye na -ahụ maka ọnọdụ okpomọkụ na -achịkwa ọnọdụ okpomọkụ iji ruo ogo. Tinye nchọta onyonyo mgbe akpọnwụsịrị.
Nchọpụta nke mkpọchi oghere oghere
Ka ilele ma agachiri agịga ahụ ma ọ bụ na emechighị ya. Ọ bụ usoro ikuku ikuku. A na -ekpebi ma ikuku emechie agịga ma ọ bụ na ọ kweghị. Ihe mmetụta ahụ na-achọpụta otu otu ma nwee barometer. Mgbe nrụgide ikuku adịghị ka ọkọlọtọ, ọ ga -akwụsịlata ozugbo wee wepu agịga etinyere na ahịrị. Tụgharịa ihu n'ọdụ ụgbọ elu ọzọ.
Nchọpụta nke burrs agịga
Ebe a nwere ike iji nchọpụta CCD kwadebe maka burrs agịga. Mgbe achọpụtara ngwaahịa na -erughị eru, a ga -ewepụ ha na mpaghara ịcha afụ, wee banye nchapụta. (Ogologo ntachi obi nke agịga dị n'ime 0.3, enwere ike chọpụta burr nke 0.05 * 0.05)
Helix okpukpu abụọ nwere mmanụ silicone, na -agbagharị ogo 180, enwere ngwaọrụ na -afụ ọkụ n'ime eriri agịga mgbe a na -ete mmanụ, a na -ete mmanụ silicone site na ala ruo n'elu, ya na barometer, ọ nwere ike nyo na akpaghị aka na mgbapụta mgbe nrụgide adịghị elu na ọkọlọtọ. A na -agba mmanụ gas ka ọ zere isi iyi ọkụ wee kpatara ọkụ. Mgbe emechara siliconization, ga -aga n'ọdụ ụgbọ mmiri jụrụ ajụ.
Iwepụ ihe mkpofu
Ịjụ ọdụ mkpofu bụ mkpochapụ ngwaahịa mkpofu site na onyonyo CCD na nchọpụta ihihi.
Ogologo mkpuchi agịga na-echekwa mkpuchi
Ọ na -anabata ụzọ slide iji bulie mkpuchi mkpuchi agịga, ihe ahụ bụ igwe anaghị agba nchara 304, ngwaọrụ nchọpụta Autonics, ma ọ dị n'ọbọ wee nyefee ya n'ụzọ slide maka mkpali, ahịrị n'ihu nke n'ọbọ nwere naanị cylinders otu na otu, electromagnetic A na -achịkwa valvụ ahụ n'otu n'otu. Mgbe a nwalere n'ọbọ ahụ, ma agịga ahụ efuola, a gaghị ewepụ akwa ahụ ma ọ bụrụ na agịga ahụ efuola, iji hụ na mkpofu mkpuchi ya na ọnụego ruru eru nke ibugo ya.
N'okpuru mkpuchi mkpuchi ịpị, enwere ọnọdụ ịnọ n'etiti mkpuchi mkpuchi iji hụ na agịga abanye na mkpuchi. Mgbe a rụchara ya, a ga -ezipụ ya n'ime ngwaahịa emechara na -enweghị oghere
A na -ejikọ agịga Rotary n'otu n'otu wee sụgharịa ya, wee tụgharịa ogo 180 ka emechara siliconization, ma tinye ya na ngwongwo
Soft echebe cover loading
Ihe mkpuchi roba na -anabata ụzọ mmịfe. Ihe mkpuchi rọba na -agafe ngwa ngwa wee daba na ebe amị amị. Ọbọ ahụ na -ada n'ọnụ ọnụ agịga site n'akụkụ ndị ahụ esichara. A na -achịkwa ahịrị ihu nke n'ọbọ ahụ otu na otu. Ọ bụrụ na ụkọ ngwaahịa dị, a gaghị etinye n'ọbọ ya. Gbaa mbọ hụ na mkpofu nke n'ọbọ na ọnụego ngafe nke n'ọbọ elu.
Soft Cover ịpị
Ihe mkpuchi rọba na -ejikọ aka uwe roba n'otu oge wee pịa ya ala, na -agbanye mkpuchi rọba ahụ ala
Obere mkpuchi agịga na-echebe mkpuchi
Ọ na -anabatakwa ụzọ mmịfe, ihe a bụ igwe anaghị agba nchara 304, yana nchọpụta ihe mmetụta Autonics. Ma enwere jaketị wee nyefee ya na slide maka mkpali. Ahịrị n'ihu jaketị nwere naanị cylinders otu otu. A na -achịkwa valvụ solenoid n'otu n'otu. Mgbe a nwalere mkpuchi ahụ, ma agịga ahụ efuola, a gaghị ewepụ mkpuchi ahụ ma ọ bụrụ na agịga ahụ efuola, iji hụ na mkpofu mkpuchi ya na ọnụego ngafe nke mkpuchi mkpuchi.
Mkpuchi mkpuchi dị mkpirikpi
Mkpuchi ahụ na -ejikọ mkpuchi obere agịga otu n'otu wee pịa ya, na -agbada mkpuchi ahụ ala
Mgbe nrụpụta ngwaahịa emechara, gaa na ọdụ oche agịga nri, wee mezue usoro okirikiri niile.
Uru Ngwa Mgbakọ Mkpa Ọbara nke IVEN
1.High ikike 12000pcs/hour.
2.Ọdịdị akpaaka dị elu, usoro ọrụ ezi uche yana njikarịcha nke ijikọ ọnụ, ndị ọrụ nwere nka 3-4 nwere ike ijikwa ahịrị mmepụta niile nke ọma site na ịmalite ibubata ya na mmepụta agịga.
3. Ngwa nyocha usoro ahịrị niile nke mmadụ niile na -eji akara elu dị ka Germany Lenuze, OMRON, iji chịkwaa nri, ọdụ na -agba ọsọ, iji jide n'aka na ọnụego ruru eru dị elu.
5.Use na -eje ozi njikwa ụgbọ ala maka akụkụ ndị na -agagharị agagharị, nkenke na -ejikwa njikwa na smoothy na -akpụ akpụ.
6.It nwere ngwaọrụ mkpu, dị ka ọdịda, jam ihe, nrụgide ikuku dị ala, na enweghị mmanụ silicone, ga -eti mkpu ma nye ihe ncheta na HMI.
Akụkụ 7.Key na mpaghara eletriki na -eji akara kachasị iji hụ na ahịrị kwụ chịm na iji ogologo oge.
8.High Quality Structure: Isi ahụ na -ewere nchara dị elu maka iburu ibu, akụkụ ngwaahịa kọntaktị na -ewere igwe anaghị agba nchara dị elu maka nhicha dị mfe. Zute ọkọlọtọ GMP
9. Nabata nhazi site na nchọpụta CCD.
Agịga ọdabara Ụdị pensụl
Ọsọ na -arụ ọrụ 10000-12000pcs/elekere
Nchọpụta CCD ziri ezi maka ntụpọ agịga 0.05*0.05 (dabere na ntachi obi dị elu dị n'ime 0.3)
Ike 380V/50HZ, 18KW
Igwe ikuku ikuku abịakọrọ 70 M3/h
Ọrụ oghere 6080*11200*1800 mm (L*W*H)
Ezigbo ihe ngosi onye ọrụ
Nke gara aga: Igwe nyocha akpaaka LVP (karama PP)
Osote: Nje Virus nlele tube gbakọta Line
Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Ampoule Machine À Coudre Bernina,